Leader In Me @ Home FAQ – Limits X
Role-Models & Leaders!
Leader In Me @ School
Leader In Me @ Home
Leader In Me @ Home ရဲ့ ရလာဒ်တွေက ဘာတွေဖြစ်မှာလဲ။
အချိန်တိုသင်တန်းမဟုတ်ပဲ ၁ နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူငယ်များ အသိသာမက အမူအကျင့်များပါ ပြောင်းလဲသွားပါမယ်။
Leader In Me ကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများရဲ့ သက်သေများအရ လူငယ်များဟာ
(၁) ပိုမိုယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီး ကူညီတတ်လာတယ်။
(၂) သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်ချက်များ ပိုရှိလာတယ်။
(၃) သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် သူများကိုပါ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ တက်လာတယ်။
(၄) အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်လာတယ်။
(၅) အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်လာတယ်။
(၆) စာနာစိတ်နှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းများ တိုးတက်လာတယ်။
(၇) ကျောင်းစာမှာလည်း တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
ဒီရလာဒ်တွေဟာ ကျောင်းသားအခြင်းခြင်း၊ ဆရာ/ဆရာမများ နှင့် မိဘများပါ သတိထားမိသော ရလာဒ်များဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို www.limitsx.com/lim မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Leader In Me @ Home ရဲ့ ရလာဒ်တွေဟာလည်း မိဘများ အံ့ဩလောက်တဲ့ ရလာဒ်များဖြစ်မယ်ဆိုတာ အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်။
Leader In Me @ Home ဆိုတာဘာလဲ။
Leader In Me @ Home သည်လူငယ်များကို လူကောင်းလူတော်နှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်လာအောင် ၁ နှစ်ပတ်လုံး အချိန်ယူကာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးသော ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိခေတ်အခြေအနေဟာ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မကောင်းသော စွဲဆောင်မှုတွေများပြားနေပါတယ်။ မိဘအများစုရဲ့ သားသမီးအပေါ်စိုးရိမ်မှုများဟာ အပေါင်းအသင်းမှားမှာ၊ အတုယူမှားမှာ၊ ရိုင်းဆိုင်းမှာ၊ စိတ်အားငယ်တတ်မှာ၊ မူးရစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှာ၊ အချိန်တွေကို အကျိုးမရှိစွာ အသုံးချပြစ်မှာ၊ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းအားနည်းမှာ၊ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်ချက်မရှိမှာနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မချနိုင်မှာတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Leader In Me @ Home ဟာအပေါ်ကအချက်တွေကို အဓိကထားပြီး ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Social Emotional Learning (SEL) လို့ခေါ်တဲ့ ဘဝ၁ ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရည်အချင်းများဖြစ်တဲ့
(၁) Self Awareness (မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ၊တွေးအခေါ်တွေ၊ဝါသနာ၊အားသာချက်၊အားနဲချက်တွေကိုသိရှိခြင်း)
(၂) Self-Management (မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးတွေကို Control လုပ်နိုင်ပြီး၊ လုပ်သင့်တဲ့အရာကို လုပ်သင့်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေလုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်း)
(၃) Social-Awareness (ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာတက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကောင်းအဆိုး ဘာတွေဖြစ် နေလဲ၊ ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကိုသိရှိခြင်း)
(၄) Relationship-Skills (Communication ကောင်းပြီးအများနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိခြင်း)
(၅) Responsible Decision Making (လုပ်သင့်တာကိုကိုယ်တိုင်တွေးတောပြီး ဘယ်ဟာက အလုပ်သင့်ဆုံးလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရည်အချင်း)
(၆) Leadership (ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းများ) ကို အဓိကထားပြီး သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။
အချိန်တိုသင်တန်းမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့နှင့် အလေ့အကျင့်ကို တည်ဆောက်ပေးသောကြောင့် ထိရောက်အကျိုးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Leader In Me စနစ်ကို နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်ရှိ ကျောင်းများတွင် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ထားပါပြီ။
Leader In Me @ Home ကို စတင်ရခြင်းမှာ Leader In Me ကျောင်းများမှမဟုတ်သော ကျောင်းသူ/သားများ၏ မိဘများက သူတို့သားသမီးများအတွက်လည်း စီစဉ်ပေးစေလိုကြောင်း တောင်းဆိုလာသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Social-Emotional Learning (SEL) နှင့် Leadership Skills တွေက တကယ်ကောလိုအပ်လို့လား။
မိဘအများစုကတော့ SEL& Leadership အရည်အချင်းတွေရဲ့ အရေးကြီးပုံကို သေသေချာချာ မသိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အရင်အတိုင်း အများစုက စာမှစာပဲဖြစ်နေပြီး ကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
မိတ်ဆွေဟာ သင့်ရဲ့သားသမီးအတွက် ဒီ Leader In Me @ Home ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာက မိတ်ဆွေဟာ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ မိဘအနည်းစုထဲမှာ ပါဝင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ဟာ အဓိကနဲ့ သာမညကို ခွဲပြီးမြင်နိုင်လို့ပါ။
အခုလိုခေတ်ကြီးမှာ မိဘများဟာ သားသမီးများကို မျက်စိဒေါက်ထောက်ပြီး လိုက်မကြည့်နိုင်တော့ပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက Social Media များရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ရိုက်ခတ်မှုတွေကလည်း ပြင်းထန်လွန်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူငယ်များကို အတင်းလိုက်ထိန်းချုပ်နေတာထပ် သူတို့ကိုသူတို့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေရှိအောင်၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်အောင်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်အောင်၊ သူများကို ဦးဆောင်တတ်အောင်နှင့် မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
ဒါကြောင့် SEL & Leadership Skills တွေဟာ မဖြစ်မနေသင်ပေးရမှာပါ။ အသက်ငယ်ငယ်ကစလေ ပိုမိုခိုင်မာတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဖြစ်သွားမှာပါ။
ဆယ်ကျော်သက်အချိန်ဟာ လူ ၁ ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချိန်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ လူငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ Identity ကိုတည်ဆောက်နေကြလို့ပါ။
Leader In Me @ Home အတွက် သတိထားရမည့် အချက်တွေက ဘာလဲ။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ Leader In Me @ Home သည် ၁ နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ဆောင်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Leader In Me သည် FranklinCovey US ၏ မူပိုင်စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် မည်သူမျှကူးယူ အသုံးချခွင့် မရှိပါ။ Leader In Me Myanmar & Limits X သည် FranklinCovey နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး တရားဝင် သင်ကြားပို့ချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၁ ဦးတည်း Licensed Partner ဖြစ်ပါတယ်။
7 Habits of Highly Effective People ကိုအခြေခံထားသောကြောင့် လူငယ် ၁ ယောက်ခြင်း၏ မိမိကိုယ်မိမိ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများပါဝင်သောကြောင့် အများကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ၂၁ရာစု အရည်အချင်းများကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုလိုက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း ပါဝင်သောကြောင့် မိသားစုရင်းနှီးမှုနှင့် မိသားစုအချိန်ပေးမှုကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းသား ၁၀ ယောက်ကို နည်းပြဆရာ ၁ ယောက်နှင့် အနီးကပ်ဆွေးနွေးလမ်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားရမည့် နေ့ရက်တွေက ဘာလဲ။
၁ လ တွင် Batch ၁ သုတ် လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၁ သုတ်တွင် ကျောင်းသား ၁၀၀ သာ လက်ခံသွားမှှှာဖြစ်ပါတယ်။
Registration ကိုအနည်းဆုံး ၂ ပတ်ကြိုတင်ပြီး စာရင်းပေးရပါမယ်။ ပထမအဆင့် ရွေးချယ်ခံရသော ကျောင်းသားများကို ဖုန်း (သို့) Zoom ဖြင့် Interview ပြုလုပ်သွားပါမယ်။ Interview အောင်သော ကျောင်းသားများကိုသာ လက်ခံသွားမှှှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ လက်ရှိအသုတ်မှာ ၁၀၀ ပြည့်သွားပါက သင်တန်းနောက်အသုတ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးပါမယ်။
Waiting-List အရှည်ကြီးရှိနိုင်တာကြောင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးစေလိုပါတယ်။
Leader In Me @ Home ကို ဘယ်လို သင်ကြားသွားမှာလဲ။
Flipped Classroom စနစ်ဖြင့် သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်သည် စဉ်းစား၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကို အဓိကထားသော သင်ကြားခြင်း စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအနေနှင့် သင်တန်းသားများဟာ ၁ ပတ်မှာ Online Video Lesson ၁ ခုကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Video Lesson အပြီးတွင် Excercise Book ထဲမှ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ ၁ ပတ် ၁ ကြိမ် မိမိအဖွဲ့ဝင်များနှင့် Online မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ ၁ ခုမှာ သင်တန်းသား ၁၀ ယောက်သာရှိပါမယ်။
တတိယအနေနဲ့ ၁ လ ၁ ကြိမ် Leader In Me Certified Facilitator နဲ့ Online မှ တဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁ ဦးခြင်း၊ မိသားစုလိုက်နှင့် အဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သောကြောင့် လေ့လာသင်ယူထားသော အကြောင်းအရာများကို လက်တွေ့အသုံးချခွင့် နှင့် ၁ နှစ်လုံး လေ့ကျင့်သင်ကြားခွင့် ရရှိသောကြောင့် တကယ်ထိရောက်မှု ကောင်းတာပါ။
Leader In Me @ Home က ဘယ်သူတွေ အတွက်လဲ။
လက်ရှိမှတော့ အသက် ၁၃ နှစ် အထက် - အသက် ၁၇ နှစ်အောက် လူငယ်များအတွက်ပါ။
အဓိကအချက်ကတော့ ရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့၊ ယုံကြည်ချက်တူတဲ့ မိဘများနှင့် လက်တွဲပြီး လူကောင်းလူတော်နှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးဖို့ပါ။
အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကျောင်းသား/သူများအတွက်လည်း စီစဉ်ပေးပါ့မယ်။
Leader In Me @ Home ကို အဖွဲ့လိုက် တက်လို့ရလား။
တချို့မိဘများကလည်း မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေသားသမီးများကို အတူတူလေ့လာစေချင်တဲ့အတွက် အဖွဲ့လိုက်ဒီ Program မှာ ပါဝင်ချင်တာရှိပါတယ်။
အဓိကအချက်က Batch ၁ ခုမှာ ၁၀၀ သာ လက်ခံတဲ့အတွက် ၁၀၀ အတွင်းဖြစ်နေသမျှ အဖွဲ့လို်က် လက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်။
သေချာအောင်တော့ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Leader In Me @ Home အပြီးမှာ Graduation အစီအစဉ်ရှိမှာလား။
ရှိမှာပါ။ ၁ နှစ်ပတ်လုံး အတူတူကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီး အတူတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ Graduation ပွဲကို စီစဉ်မှာပါ။
နောက်ထပ်လည်း Leader In Me Camp များနဲ့ ပြိုင်ပွဲများကိုလည်း ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်များအတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြီးဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး Membership Club ၁ ခုဖြစ်သွားမှာပါ။
Leader In Me @ Home ရဲ့ တန်ဖိုးက ဘယ်လောက်လဲ။
ဒီ Program ရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ ဘဝ ၁ ခုလုံးအတွက် ကြီးမားတဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေကို ရရှိသွားမှာပါ။
၁ နှစ်လုံးစာ သင်တန်းကြေး အနေနဲ့ကတော့
Registration Fee - ၄၇ ၀၀၀ ကျပ်
Membership Fee - ၂၅၀ ၀၀၀ ကျပ်
ဒီထဲမှာ ပါဝင်သွားမှာတွေကတော့ သင်တန်းအတွက် လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူများနှင့် ၅၀ ၀၀၀ ကျပ်ထိတန်ဖိုးရှိသော လက်ဆောင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁ နှစ်ပတ်လုံးမှာလည်း Progress လက်ဆောင်များနှင့် Surprise လက်ဆောင်များ ချီးမြှင့်သွားမှာပါ။
Program Home ကို ပြန်သွားရန်။
Program အသေးစိတ်ကို ဖတ်ရန်။
Messenger မှ မေးရန်။
မိတ်ဆွေ၏ သားသမီးအတွက် စာရင်းပေးရန်။
Batch ၁ ခုတွင် Participants ၁၀၀ သာ လက်ခံပြီး ၁ လတွင် Batch ၁ ခု သာလက်ခံပါသည်။
မိဘများ မိမိသားသမီးအတွက်အောက်ပါ Application ကို ဖြည့်ပါ။ Application မှရွေးချယ်ခံရသော ကျောင်းသားများကို ၁ ပတ်အတွင်း ဖုန်း (သို့) Zoom ဖြင့် Interview ပြုလုပ်သွားပါမည်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ရှိသောကြောင့် အားလုံးကို လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ နားလည်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Best Wishes!
Batch 1 - Jan 2021
Batch2- Feb 2021
Batch3- Mar 2021
(စာရင်းပေးရန် ၅ မိနစ်ခန့် ကြာပါမည်။)
Membership + သင်တန်းကြေး + သင်ထောက်ကူ + လက်ဆောင်များ
(၂၉၇ ၀၀၀ ကျပ်)
Unleashing Greatness In You
Ygn : +95 97788 6655 1~3
Sg : +65 9859 6202
Copyright © 2020 Limits X (Powered by Franklin Covey & Leader in Me Myanmar)